Sida si sax ah loogu hagaajiyo midabka GIMP (iyo 2) | Laga soo bilaabo Linux
1 Sida si sax ah loogu hagaajiyo midabka GIMP (iyo 2)
2 II.- Maxaad ugu hagaajineysaa midabka RGB?
Sida si habboon loogu hagaajiyo midabka GIMP (iyo 2)
Markaan fahamno sida aaladaha dhijitaalka ah iyo kormeerayaashu u qabtaan una soo saaraan midabka, waan sii wadeynaa.
II.- Maxaad ugu hagaajineysaa midabka RGB?
GIMP, Si ka duwan Photoshop, ma laha qaab asal ah oo midabka loogu maareynayo nidaamka Midab kala go ' -sidoo kale loo yaqaan CMYK- laakiin wuxuu sameeyaa sidii RGB. Qaar badan oo naqshadeeyayaasha garaafka ah ayaa qalad ka sameeya sameynta midabkooda iyadoo loo marayo nidaamka. CMYK taas oo ah qalad weyn, si loo fahmo sababta aan u xaqiijinayo waxaas oo kale waxaan arki doonnaa, si kooban, waa maxay….
Nidaamka Midabka Kala-goynta ama CMYK: qaybtii ugu dambaysay waxaan ku sharaxnay inay jiraan laba wado "Macmal ah" si loo soo saaro midabka; isagu Nidaamka lagu daro -in aan horay u aragnay- iyo Nidaamka kala-goynta, sifiican loo yaqaan CMYK.
El Nidaamka Midabka Kala-goynta, Si ka duwan RGB taasi waxay ka timaadaa mugdi guud -shaashadda la demiyo ma leh midabbo shaashadda- asal ahaan ka soo jeedaa midabka, badanaa cad, ee substrate -warqad, maro ama dusha sare oo daabacan- midabyada lagu daro. Waxaa loo yaqaan kala-goyn sababta oo ah midabada aan aragno waa natiijada kala-goynta qeyb ahaan mowjadaha iftiinka dusha sare ee midabka midabaysan ama ranjiyeysan.
Nidaamka midabka RGB
mugdiga ayuu ka bilaabmaa ...
… Dhanka kale isagu CMYK se
wuxuu ka bilaabmaa dusha sare,
Badanaa qaabkan waxaa loo adeegsadaa daabacaadda warshadaha -buugaag, boodhadh, xaashiyaha, joornaalada, sumadaha iwm.- iyo si tan loo gaaro, seddex midab ama midab ayaa la isticmaalaa: Cyan, Mwakiilka, Yellow iyo blacK, halkan oo laga soo gaabiyey CMYK.
Si loo gaaro daahyada kala duwan, sawirada waxaa loo jeexay dhibco yar yar oo adag oo cabbirro kala duwan ah (fiiri sawirka) oo loo yaqaan mass mass.
"OK Tubbada, taas waa horeba waa la fahmay ... laakiin markaa maxay tahay sababta snails ay tahay inaan ugu hagaajiyo midabka RGB iyo ma CMYK? "Labadayda akhristayaasha joogtada ah ee garashada lihi way yaabi doonaan. Asal ahaan waxaa jira laba sababood:
In kastoo CMYK dhab ahaantii waa hab lagu matali karo midabka haddii aan wax ka beddelno qiyamka ku jira nidaamkan, waxa aan dhab ahaan u beddeleyno waa qiyamka tirada khadadka, taas oo ah qalad. Haddii qof ka shakiyo arrintan waxaan ku sharaxi doonaa aniga oo faraxsan.
Kala duwanaanta midabka firfircoon ee nidaamka CMYK aad ayuu uga yaryahay tan RGB, sidaas darteed haddii aan sameyno beddelaad ah RGB a CMYK waxaa jiri doona lumis aad u badan oo ah macluumaadka midabka oo aan sinaba dib loogu soo celin karin. (Fiiri sawirrada)
Sawirka gudaha RGB
Sawirka gudaha CMYK
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » Sida si sax ah loogu hagaajiyo midabka GIMP (iyo 2)
Argggg !!! Markaan sii faraxsanaado, waad iga jartay akhriska. Aad ugu eg animation-ka Ruushka: Koniec !!! LOL ..
Waad ku mahadsantahay qaybtan labaad .. Waxaan doonayaa inaan waxbadan ka ogaado * - *
Su'aal, sida loo xalliyo dhibaatada luminta macluumaadka midabka ee daabacaadda warshadaha? mise waxaad ka shaqeysaa meel hoose oo ku taal CMYK? Anigu ma ihi nashqadeeye aad uga fog laakiin waan xiiseynayaa.
PS: By the article aad u wanaagsan! , Waxaan sugaa qeybta xigta.
Maya, sawir waligiis laguma shaqeyn karo CMYK laakiin gudaha RGB, waa badan tahay haddii sawirku ku jiro qaab CMYK waa inaad u rogtaa RGB si loo hagaajiyo midabka.
Adobe Photoshop wuxuu leeyahay waxqabad eegis ah CMYK sawir ahaan RGB, horudhacaani "waa lawareejiyay" iyadoo la adeegsanayo astaamo ICC si loo helo sawirka ugu dhow waxa lagu daabici doono shaashadda. Tan waxaa loo yaqaan "Tijaabada Jilicsan."
Hadda, haddii waxa aan dooneyno uu yahay sawir u dhow midabbada kala duwan RGB tan ugu badan ee lagu taliyay waa daabacaadda Hi-Fi, oo sidoo kale loo yaqaan hexacrom. ( http://consultoresfca.blogspot.com/2008/07/hexacromia-impresion-seis-colores.html )
Haddii qof doonayo inuu aad ugu sii fogaado maareynta midabka farshaxanka garaafyada, waxaan kugula talinayaa buugan weyn: http://gusgsm.com/notas_administracion_o_gestion_color
Waxaan sugayaa qeybta saddexaad.
In kasta oo aan la yaabanahay, in yar oo mowduuca ka baxsan, ma waxaa jira oo keliya RGB iyo CMYK mise kuwo kale ayaa jira?
Maya, ma jiraan kuwo kale ... qaabka midabka R IYO B -Casaan, Jaale, Buluug = casaan, jaalle, buluug-, taas oo ah waxa aan baranayno marka aan ku ciyaareyno qalabka loo yaqaan 'crayons' ee xanaanada carruurta, waa nidaam duugoobay.
Noocyada cusub ee HiFi ee loo adeegsaday warshadaha farshaxanka garaafka ayaa runtii ah noocyo ka mid ah nidaamka CMYK maaddaama ay raacaan isla mabda'a: ku dabaqidda taxane ah noocyo khad ah substrate si loo gaaro midabyo kala duwan.
Ka waran haddii ay jiraan dhowr siyaabood oo lagu muujiyo qiimaha midabada, mid ka mid ah ayaa loo isticmaalaa qaabeynta bogagga WEB: nidaamka hexadecimal.
Cutubka III waxaan wax yar ka taaban doonaa mawduucan.
Intee gaaban waan ogaa, waan ka xumahay dhibaataynta, waxaad ogaan doontaa sida loo fahmo.
Markii aan soo galay adduunyada Ph, waxaan eegay oo keliya tuto ka dib ilaa aan ka hayey farsamooyin ii haray, toobiyeyaasha kumbuyuutarrada iyo haramaha kale, weligay maskaxdayda kuma soo dhicin si aan uga bilaabo halka aad wax ka sharaxayso, taasi waa sababta aan u dareemay yaraanta markaan akhriyay warbixintaada "Gimp where if and where sometimes" (ama wax la mid ah) weligay ma aan malayn jirin xaaladaha noocaas ah.
Eeg sida xiisaha leh, halkan maaddaama carruurtu ku ciyaareyno midabbo iyo miyir la'aan waxaan u adeegsannaa moodellada sida kuwa R IYO B barashada qaafiyad caan ah
♪ casaan, Jaale iyo Buluug ata cataplum! ♪
Waad salaaman tahay, su'aal baan qabaa .... Waxaan isticmaalayaa Gimp 2.8 waxaanan ka beddelay RGB oo aan u beddelay CMYK oo leh 'Separate + oo waxay u soo baxday wax madow. Sideen ugu socon karaa inaan cadeeyo?
Waxaan u maleynayaa, taasi, inay leedahay Magenta aad u badan.
Ku jawaab Kumankai
Waad salaaman tihiin, cashar wanaagsan! Waxaan raadinayay wax ka duwan maxaa yeelay waxaan si hooseeya u baranayaa sida loo sawiro magaalada Krita. Wax baan taabtay hadana waxaan arkay inay midabadu dansan yihiin. Sidoo kale, markaan sawirka u rogo Jpg, wax walba caadi ayey ku soo noqdaan, laakiin waa jiiditaan. Waxaan u qaabeeyey rgb laakiin waxba, weli waxaan u arkaa midabada sidii filim duug ah ... ma inaan dib u rabaa? Waad ku mahadsan tahay wax ku biirinta ay iga caawisay inaan wax badan ka fahmo waxaas oo dhan.
Ku jawaab Galena